You are here: Home / Solution Solutions / La dagaallama nabarrada iyo xakamaynta dhirta iyo geedaha
Qulqul-celinta "Ephemeral" - Waxay yihiin jaangooyooyin yar oo ka baxa iyo dibedda iyadoo ku xiran roobka
As I was reading this report about erosion, I thought to myself that this information was absolutely irrelevant to what I’m doing as the editor of The Magazine Fixer Fikradaha. Waxay ka wada hadlayaan xaalada wargeyska dalxiiska, oo ku saabsan xaqiiqda ah inay khasaaray dhulka taas oo macnaheedu yahay nabaadiin badan, laakiin maaha wax aan gaar ah oo aan isticmaali karo xalka Earth Planet. Kadibna si lama filaan ah dhamaadka warbixinta, gabagabada:
Dhaqdhaqaaqa ugu waxtarka leh waa inuu abuuro cawska cawska ama dhirta gudaha ama dhinacyada beeraha dalagga
gullies waa wadiiqooyin si dhaqso ah u soo baxaya ka dib roob (oo ka baxa qorraxda)
oo i rumee ... waxaa jira waxyaabo badan oo xun oo ku jira!
yareeyo nabaad guurka
yareeyo qulqulka wasaqaysan
Habka ugu fudud ee ugu dhaqsiyaha badan waa inuu abuuro caleemo cagaar ama geedo gudaha ama hareeraha beeraha dalagga beeraha. Caleemaha dhoobada waxaa lagu magacaabaa strips filter, sababtoo ah waxay soo saaraan faleebada iyo wasakhda hawada ka soo baxaysa dhinaca beerta
caleemaha cawska ama dhirta lagu dhex beeray dariiqa waxaa lagu magacaabaa bakhshiistayaasha riparian. Goobjoogayaasha riparian waa khadad kama dambeys ah oo difaac ah oo lagu xakameynayo biyo daadin ah ka hor inta aanay galin biyo ama huur
Strips waxaa lagu beeray magaca magaca, taas oo ay weheliso wareegyada dhulbeereedka. Qaadirku wuxuu dhuujiyaa gaabis oo uu yareeyaa daadin iyo dhoobo iyo nadiifiyo biyaha oo ka yimaada biyaha sida ay u socdaan berriga.
Xirfadahaan fudud waxay noqon karaan kuwo aad waxtar u leh. Dib-u-eegis daraasaddo la daabacay ayaa lagu ogaaday in tuubbooyinka la xareeyey:
41 ilaa 100 boqolkiiba qulqulka
9 ilaa 100 boqolkiiba biyaha biyaha ah
27 ilaa 96 boqolkiiba fosfooraska
7 ilaa 100 boqolkiiba nitrate
Labo qorshe oo kala duwan ayaa la baarayaa. Mid ka mid ah 10 boqolkiiba dhul-beereedka wuxuu ku beddelayaa cawska cawska ee ku yaal hoose ee goobaha daaqsinta. Kiciyeyaashii labaad waxay 10 boqolkiiba ku dhejisaa cawska cawska.
Article Source – Loosinta Ground - Warbixin Dheeraad ah
Documents – Qaybta Erosion - Mashruuca Maktabada Guud ee Fikerka
Pictures Talk! – Erosion Sediments
Video ah oo ku saabsan xakamaynta nabaad-guurka oo ay sameeyeen caato
Si taxadar leh u fiirso fiidyowga Waa arrin aad u xiiso badan, laakiin intooda badani waxay ku saabsan yihiin ... soo bandhigida xaaladda iyo sida xun ee ay tahay. Xaliyayaashu waxay u kala soocayaan indhahaaga ilaa dhawr ilbidhiqsi!
jwjshgsgshjs wuxuu leeyahay,